Israel Ministry of Tourism uye Museum yeMaJuda People kuti vatorezve kuvhurwa kukuru kwechiratidziro chepakati
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Israel Nhau » Israel Ministry of Tourism uye Museum yeMaJuda People kuti vatorezve kuvhurwa kukuru kwechiratidziro chepakati
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kuzivisa kuvandudzwa kutsva kweMuseum yeMaJuda People muTel Aviv, iyo Israel Ministry of Tourism (IMOT) yakabatana kuitisa yakakosha Grand Reopening Webinar neChitatu, Gunyana 9 na1 pm EST / 10 am PST. Vatori vechikamu vanobva kuUnited States neCanada vachatorwa parwendo rwemuMuseum vachitungamirwa na CEO weMuseum Museum Dan Tadmor naNorth American Sales Manager, Grace Rapkin, iyo icharatidza hunyengeri hweiyo nhurikidzwa nhatu dzeCore Exhibition, iyo yakarongerwa kuvhura mwaka uno wechando. .
Kuvhurwa kweCore Exhibition nyowani ndiro dombo repamusoro rekurudziro yemakore gumi nemaviri uye mushandirapamwe wemamiriyoni zana emadhora Muna 12, iyo miziyamu yakavhura bapiro nyowani, iine zviratidziro zviviri zvechigarire, kusanganisira mamusiyamu ane mukurumbira masinagogi mamodheru, chiratidziro chakazara chevana chekuratidzira pamwe nemavharanda kwechinguva, kuratidzira kutenderera. Shanda paCore Exhibition nyowani yakatanga muna 100 uye iri pachinangwa chekupedzisa muna2016.
"Tinofara nezve chiono chitsva chatiri kuvhura ku Museum of the Jewish People," akadaro Tadmor. "Vatori vechikamu paWebinar - nevashanyi vemuMuseum - vanozotorwa parwendo kuburikidza netsika nemagariro echiJuda, vachiratidza pfungwa dzevanhu vechiJuda nemipiro yavanayo, uye yavanoramba vachiita kuvanhu."
"Iyo Museum of the Jewish People inzvimbo huru kune chero munhu anoda kudzidza zvakawanda nezvetsika dzechiJuda uye nhoroondo paanoshanyira Tel Aviv," akadaro Eyal Carlin, IMOT Tourism Commissioner kuNorth America. "Chiratidziro chitsva ichi chinopa hunyanzvi hwekutaura nyaya iyo miziyamu inozivikanwa kwazvo, ichipa kuratidzwa kunoratidza hunyanzvi, zvigadzirwa, vanhu nenzvimbo dzakakosha kunhaka yechiJudha."
Chiratidziro chitsva ichi chichapetwa katatu musamuyemu yemuziyamu kusvika pamazana matanhatu ezviuru zvemaoko. Iyo nyaya inotanga pauriri hwechitatu, iyo inoratidza tsika dzechiJuda uye mupiro wakaitwa nemaJuda kune budiriro yepasirese munguva yakapfuura uye munguva dzazvino uno. Iyo yechipiri furati inotevera nguva yenguva yenhoroondo yechiJuda, kubva panguva dzeBhaibheri kusvika nhasi. Chiratidziro chinopera pasi pevhu, apo vashanyi vanozotorwa kuburikidza neakakosha maitiro ehupenyu hwechiJuda: Bhaibheri, Shabbat, Sungano uye Kunamata. Pano vashanyi vanodzidza nezve hwaro hwepfungwa yekutenda kwechiJuda uye hunhu hwakagovaniswa nemaJuda nemaKristu zvakafanana.
Finnair vanobatana naJuneyao Mhepo paHelsinki-Shanghai ...
SriLankan Airlines Inotangazve Moscow - Colombo ...
Moto muhombe uye kuputika: London's Elephant and Castle ...